Ethiopia’s Court Sentences Oromo Political Prisoners | Our Struggles.com
Manni Murtii Ol’aanaa Federaala Itoophiyaa Oromoota 69 kan miseensota dhaaba mormituu Koongirasii Federaalistii Oromoo(KFO) ta’anii fi kan mootummaan ADWUI bara 2003/2011 keessa worraaqsa akka biyyoota Arabaa keessatti uumame kaasuudhaaf hojjachaa jiru jedhee hidhe irratti murtee dabarse.
Ebla 2003/2011tti mootummaan biyyittii Oromoota 69 hidhe keessaa namoota 18 woggaa tokkoon dura bilisaan gaggeessee kan hafan 45 irratti guyyaa harraa murtii adabaa waggaa 3-12 ta’u itti kennee jira. Murtii xiqqaa woggaa sadii kan itti murtaa’e maanguddoo woggaa 79 obboo Bulchaa(Mokkonnaa) Sooressaa ti.
Garee kana keessa Obboo Guutuu Mullisaa(waggaa 9 kan itti murteessan) fi Asfaw Angaasaa lachanuu bara 2005-2010 Kongiressii Uummata Oromoo bakka bu’uudhaan filatamanii miseensa parlaamaa turaniiru. Namoonni 5 biraa Kongiressii Uummata Oromoo bakka bu’uudhaan filatamanii miseensa caffee kan turan kan akkaTaddesse Gelalicha akkasuma murteen itti kennameera. Murteen ol’aanaan woggaa 12 kan itti kenname obboo Wogaayyoon Kongiressii Uummata Oromoo bakka bu’uudhaan bara 2010 keessa mana maree bakka bu’oota uummataatiif naannoo filannoo Mooyyaleetti dorgomee kan ture dha.
Manneen murtee Itoophiyaa qaama hojii raawwachiiftuu/mootummaa biyya bulchu irraa bilisa jennee hin amannu. Wolumaagalatti mootummaan kun namoota mirga keenna kabajsiifachuu qabna jedhanii murannoodhaan qabsaawan haala kanaan kan adabu hamilee isaanii cabsuudhaan akka isaan waan mirgaa hin dubbanne gochuu fi uummata Oromoo sodaachiisuudhaan qabsoo uummata Oromoo dadhabsiisuuf ta’uun beekkamuu qaba. Mootummaan kun qabsoon uummata kanaa cimnaanii fi aangoon harkaa baanaan yoomiyyuu kan itti hin deebineef badii hojjateef kan itti gaafatamu ta’uu waan beekuuf angootti gogee jira. Gocha mootummaan abbaa irree ADWUI uummata keenyarratti raawwachaa jiru kana KFO cimsee balaaleffata. Uummanni Oromoo hidhamtoota siyaasaa manneen hidhaa Qaallittii, Qilinxuu fi Zuwaay jiranu deemee gaafachuudhaan akka bira dhaabbatu waamicha taasifna.
For Full Report: http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/afr250112011en.pdf
This entry was posted on January 7, 2014 by behailum2012 in General Information, Home.